Soo Bandhigida canabka: Taariikhda kooban
Ma jeclaan lahayd inaad badan oo ku saabsan canabka ogaado? Tani waa article saxda ah in aad waa in la akhriyo. Waxaan ka hadli doonaa taariikhda kooban ee codsiga iyo sida ay u shaqayso in this article. Waxaan rajeynayaa, ka dib markii reading this, waxaad yeelan doontaa in ay fahmaan waxa canabka waa waayo, xataa si sidii hore ka hor.
The Makaanikada canabka ah
Canabka loola jeedaa nooc ka mid ah video qaybsiga app kaas oo u ogolaanaya dadka si ay u abuuraan una daabacaan videos lix-labaad. Dadka awoodi doontaa inay la soo wareegto ilaa iyo canabkii iyada oo iyaga u gaar ah xisaabta Twitter ama via e-mail. Kuwani videos daabacay lagu wadaagi karaa portals Internet sida Facebook iyo Twitter dabcan. Canabka sidoo kale loo isticmaali karaa in dhirtuba videos online daabacay.
App Tani ayaa loo dhigay ilaa ay seddexda ciyaaryahan ee: Dom Hofmann, rus Yusopov iyo Colin Kroll
Tan waa la sameeyey bishii June 2012. Waxaa in ay shirkad standalone isticmaalay ilaa laga soo iibsaday by shirkadda warbaahinta bulshada ee kale loo yaqaan Twitter bishii October, 2012 Warar ayaa sheegaya in shirkadda siiyaa $30.000,000 waxay u.
App geedka canabka ah waxaa si rasmi ah bilaabay on January 24th 2013. Waxa ay ku bilaabatay sidii codsi dheeraad ah qalabka macruufka. Sii daynta version ah Android siidaayey by June 2, 2013 Waxaa kaliya taako ka mid ah laba bilood, waxa ay noqotay codsiga video-qaybsiga ugu caansan oo inta badan looga faa'iideysan suuqa online. Tani xitaa dhacay iyadoo heerka ugu hooseeya ansaxinta u app laftiisa.
Sidaas darteed, on April 9, 2013 codsiga canabka ah u noqday codsiga ugu soo bixi lacag la'aan ah ka App macruufka ah Store. Dhawaan, version internetka ee arjigan la sii daayay May 1, 2014 Tan waa la sameeyey si loo suurtogeliyo in dadka isticmaala ay u raadiyaan videos on internetka isticmaalaya codsiga laftiisa.
Sidii hore loo soo xusay, codsigan si gaar ah saamaxaya kuwa isticmaala si loo badbaadiyo diiwaanka video clip ah mid aad u gaaban. Tani waxay si gaar ah video clip socdaa qiyaastii lix seconds dheer. Duubo waxaa loo sameeyaa sida caadiga ah iyada oo app ee ka dhisay camera. Waa maxay xitaa ka sii badan faa'iidada badan oo ku saabsan codsigan waa in ay tani camera gaar ah diiwaanka kaliya halka shaashada la taabtay by user. Tani waxay awood u qofka inuu xaalkaa video saxda ah waxaa isagu hadduu doonayo inuu. Waxaa kale oo u ogolaanaya inay abuurto saamayn stop mooshin geedcanabka.
Sanadihii la soo dhaafay, qaababka kale ayaa lagu daray in codsiga laftiisa. Bishii July 2013, shirkadda bilaabay qalabka image naf baxay, channels curated oo awood u leh inay ilaaliyaan posts gaar ahaan ka dadka kale ee aragtida. Taas macnaheedu waa in aad hadda ka dhigi kartaa canabkiinna videos gaarka ah ee aad firaaqada ah u gaar ah.
Kuwaas oo ka mid yihiin faahfaahinta waaweyn oo idinku waajibka ah inaad ogaato oo ku saabsan taariikhda canabka ee. Waa mid ka mid ah ugu dhaqsiyaha badan sii kordhaya codsiyada online inaad marwalba u isticmaali kartaa, haddii shaqo ama dayada shakhsi. Sidaas waxa aad sugayso? Ka hor taga oo u soo bixi app sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Ma xaqiiqo ah in aad ka qoomameyn doonto.
> Resource > Video > canabka soo bandhigaysaa: A Taariikh Kooban